Bowel - pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Ny tsinay dia mahazaka betsaka, indrindra rehefa ririnina dia manjary malaina sy malemy izy ireo. Ary tsy mahagaga izany, rehefa dinihina tokoa, tahaka ny fantatry ny rehetra, tsy dia miraharaha ny sakafontsika sy misotro kely kokoa isika rehefa tsy mahazo aina any ivelany. Amin'ny lohataona dia mahazo ny tapakila ho an'ny sakafo tsy mahasalama isika - mahatsiaro reraka isika, tsy mihetsika intsony ny akanjonay lohataona ary misy olona mijaly noho ny fitohanana ary manana olana amin'ny fandevonan-kanina hafa. Noho izany dia misy antony sasany mitady ny fanadiovana ny tsinaibe mandritra ireo volana ireo. Fa ahoana no hahasalama ny tsinaiko indray?
Gut fitness - izao no fanombohanao
Nandritra ny fikarohana nataontsika dia nahita vokatra marobe tamin'ny Internet koa izahay izay heverina fa manadio, manangana ary mampiorina ny tsinay.
Fitness ho an'ny tsinay
Fa tsy azo atao ve izany raha tsy misy an'io? Fa! Maka 10 andro amin'ny fotoanao fotsiny dia mitadiava namana vitsivitsy, na mandresy lahatra ny vadinao hiditra ao. Mandritra ireo 10 andro ireo dia tokony ho ambany araka izay azo atao ny haavon'ny adin-tsainao ary tokony hatory mandritra ny adiny 8 isan'andro ianao. Atombohy eo amin'ny 7 andro mialoha ny fanasitranana anao amin'ny fisotro rano roa na telo litatra na dite tsy mamy isan'andro. Hamarino tsara fa mitsako sakafo maraina be loatra ianao ary mandingana ny sakafo hariva.
Ny lisitry ny fiantsenana 10 andro anao
Ny ankamaroan'izy ireo dia manambatra ny fomban'ny tsinay ary ny tanjona dia ny hahavery tavy ririnina vitsivitsy. Na izany aza, raha tsy te hihena ianao amin'ny toe-javatra rehetra, na tsy avela noho ny antony ara-pahasalamana dia tokony hifantoka amin'ny sakafo fanampiny ianao. Raha misakafo ianao dia mandehana miantsena toy izao:
Ronono almond sy ronono soja fa tsy rononon'omby
Yogurt vita amin'ny rononon'omby, rononon'ondry na ron'osy ary ronono soja
Voasarimakirana maintso - tsara kokoa an-trano
Rano fakany (raha tsy izany dia ranom-boankazo ihany koa)
Legioma tsy mamontsina
Ny zavokà, atody ary trondro dia hiaro anao tsy ho very haingana loatra. Raha te hifikitra amin'ny sakafonao ianao ary hampihena ny lanjanao dia avelao ireo singa ireo. Tokony hanapaka alikaola, kafe, sigara ianao ary mazava ho azy ny sakafo rehetra misy siramamy amin'ny fiainanao. Ary ny tsara indrindra aorian'ny fanasitranana anao, satria tsy misy mahasalama na iray aza. Na izany aza, takatsika fa tsy misy mahasolo kaopy kafe amin'ny maraina.
Ny fanaonao isan'andro
Na ahoana na ahoana, makà fotoana ampy ho an'ny sakafo maraina, farafahakeliny antsasak'adiny. Manodidina ny antsasak'adiny mialoha, dia afaka mandray vovo-tany iray sotrokely vovoka natsipy anaty rano ianao. Mampihena ny bakteria tsinay io ary ny tanjona izao dia ny hampijanona ireo mikraoba ratsy ireo tsy hanome sakafo azy ireo hihamaro. Rehefa avy mifoha ianao dia afaka manomboka amin'ny vahaolana sira Epsom ihany koa. Manala ny tsinay haingana sy azo antoka ity. Tandremo anefa, satria ny fiatraikany dia tsy natao ho an'ireo olona manana fitoeran-dronono ihany. Raha tsy izany dia tsy dia maimbo ny fofona rehefa mandeha ny andro, izay mariky ny detox tsara.
Atambaro miaraka amin'ny sakafo avy amin'ny lisitry ny fiantsenana ny sakafo maraina ary mihinana mofo tsy misy gluten na mofo misy tsipelina, salama ihany koa ny voanjo. Aza mitsahatra mitsako ny sakafo mandra-porridge fotsiny ao am-bavanao. Mihinana miadana araka izay azo atao mandra-pahatsapanao fahatsapana fahafaham-po kely. Aza misotro zavatra amin'ny sakafo maraina.
Amin'ny sakafo atoandro dia miaro ny tsinainao ianao, mihinana amna legioma madio tsara indrindra ary atambaro amin'ny legioma roa tsy mitombo. Eo anelanelany dia zava-dehibe ny misotro rano betsaka araka izay azo atao. Raha manao fanatanjahan-tena koa ianao na mandeha any amin'ny sauna, dia tsy maintsy ampitomboinao ara-dalàna ny fepetra takian'ny rano arak'izany. Amin'ny ankapobeny, ampitomboy ny fampihetseham-batanao, miakatra tohatra, sorohy ny bus ary mandehana. Ireo atleta dia tokony hampihena kely ny hetsika ataony mandritra ny andro ary handrafitra ny andro fitsaharana ihany koa. Tsy misy sakafo hariva ary, ankoatry ny dite raokandro, rano na ron-kena, dia voarara ny ambiny.
Aorian'ny fanasitranana dia tsy tokony hihoatra ny tsinainao amin'ny sakafo mavesatra ianao. Atombohy indray miaraka amin'ny voankazo mora levona, toy ny akondro, vary hisakafo atoandro ary lasopy trondro na legioma amin'ny hariva. Raha maharitra eto ianao dia hahatsapa ho mendrika sy milamina avy eo. Ary raha ataonao tsara dia tsy mila mosarena ianao, na dia tsy ampy aza ny 500 kilao isan'andro. Arakaraka ny mazoto ilay mitsako tsy mihinana firy. Tavy hatramin'ny 4 kilao no azo atao ao anatin'izay andro izay. Saingy tsy izany ihany - sitrana ihany koa ny flora-tsinay, ny bakteria tsinay salama dia manohy ny asany ary mitombo ny fiadanany. Noho izany dia mora ny manao raha tsy misy ny vokatra tsinay lafo vidy
Fanontaniana, sosokevitra sa fanakianana? Ento foana izy io!
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 9. Febroary 2021 9. Febroary 2021 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Tsinay, Fitness Fitness, Fitness Fitness, Fitsaboana ny tsinay, sakafo, Fanovana sakafoLeave a Comment mifanaraka amin'ny lohataona - ny programa fanatanjahan-tena ho an'ny tsinay